Ma ogtahay Mudane Madaxweyne in dadkii aad madaxweynaha u ahayd gaar ahaan kuwii caasimadda Muqdisho ku noolaa ay yihiin kuwa ugu cabashada badan caddaalad darrida hareysay hay’adaha garsoorka awgeed?
Mudane ma aragtay in dhibaato culus ay ka dhex aloosantahay Wasiirradii cusbaa qaarkood iyo agaasimeyaalkii guud ee hawsha ka dhaxeysay? Sababtuna ay tahay Wasiirrada qaarkood oo doonaya in ay keensadaan Agaasimayaal ay jeebka ku wataan oo u dhaga nugul? mise lasocotaa in wasiirradii, ku xigeennadii iyo Agaasimeyaalkii midba qorshe gooni ah uu wato, iskuna dhibban yihiin?
Ustaadoow ma ogtahay in ay jiraan Wasiirro iyo Agaasimeyaal aad loola dhacsanyahay howlahooda hasayeeshee ay magac dil ku sameynayaan kuwa karti xumada iyo musuq maasuqa ku sifoobey oo doonaya in ay iska leexiyaan.
Madaxweyne ma ogtahay sababaha diblamaasiyiin badan iyo mas’uuliin badan oo Xukuumadda ka tirsan kuugu imaanayaan in ay tahay mas’uuliintii dowladda oo aan amar laga qaadaneynin oo ka cabsanaya beelaha Mugadisho dega dad ka tirsan oo weli xarumo dowladeed xoog ku haysta? Mudane Madaxweyne Allah ha kuu fududeeyo howlaha aan shaqadaada ahayn ee lagula soo aadayo kuwaas oo kaa mashquuliyay danihii kale ee xafiiskaaga loo igmaday.
Previous articleCadaado: Magac iyo Maamuus Lagu Gaaray Midnimo
Next articleFAALLO: Daryeel Xumada Shaqaalaha Soomaaliyeed